यस्तो घरमा लक्ष्मी नबोलाइ आफैँ आउँछिन्
२३ पुष । अर्थशास्त्रका महान् विद्वान चाणक्यले मानव जीवनलाई सुखी बनाउन नैतिकशास्त्र लेखेका थिए। धेरै राजाहरूले आफ्ना नीतिहरू अनुसरण गरेर उनीहरूको नीति अनुसरण गर्थे। चाणक्यका नीतिहरू हरेक धर्म र वर्गका लागि लाभकारी ठानिएका छन्। तिनीहरूलाई ग्रहण गरेर, तपाईं जीवनका कष्टहरूबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। उनको नीतिशास्त्रमा उनी भन्छन् कि यदि कोही व्यक्तिले यी तीन कुराको ख्याल राख्छ भने ऊ सँधै खुशी रहन सक्छ र लक्ष्मी पनि उसको घरमा बस्छिन् ।
दंपतोः कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयमागता।।
चाणक्य नीतिको तेस्रो अध्यायको २१ औं पदमा,लेखिएको छ – ‘कि जहाँ मूर्खहरूको पूजा हुँदैन, जहाँ खानेकुरा र अन्न धेरै मात्रामा भण्डार गरिएको छ, जहाँ पति र पत्नी झगडा गर्दैनन्, त्यहाँ लक्ष्मी नबोलाइ आफै आउने गर्दछिन् । ‘
उनले यसो भन्नुको मतलब यो हो की मानवले मूर्खहरूको पूजा गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छैन । सम्मान सिर्फ ज्ञानीका लागि मात्र गरिन्छ, कुरा पनि उनीहरुको मात्र गरिन्छ । जहाँ मुर्खको पुजा हुँदैन त्यस्तो घरमा लक्ष्मीको वास हुन्छ ।
चाणक्य भन्छन् – जुन घरमा भण्डार खाद्यान्नले भरिएको छ, घरमा मानिसहरू भोकले मर्दैनन्, अन्नको दानासमेत फ्याँकिएको हुँदैन र पति र पत्नीबीच झगडा हुँदैन, यस्तो घरमा लक्ष्मी बिना बोलाए आफै बस्न आउँदछिन् ।
हेर्नुहोस् त यतिधेरै रहेछन् हरियो केराउ खानुका फाइदा !
यतिबेला तरकारी बजार तथा खुद्रा पसलमा बेच्न राखिएको तरकारीमा झट्ट…
यस्तो छन् बोक्रासहित स्याउ खानुका फाइदा
डा. रविन्द्र पाण्डे भन्छन्– नडराऔं नयाँ भाइरस भन्ने हल्ला मात्र हो
४० वर्ष पुग्नु भो ? इम्युनिटी बढाउन खानुहोस् यी ८ कुरा